iMovie VS ikpeazụ ịkpụ pro
Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ọkaibe omume ebudatara maka video edezi. Apple mepụtara iMovie na nke a na-adịghị anya mgbe mwepụta e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-nwekwara mepụtara yiri omume na nke a iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe mmemme ọrụ na-agbakwunyere mere na iMovie nanị na-ahụ biri. Final Cut mepụtara Macromedia bụ otu ndị dị otú ahụ yiri usoro. O kere a na-ahụ anya usoro mgbe ọ na-abịa ka onye ọrụ oke na a nkuzi ga-akọwa na atụmatụ nke ma omume nke mere na ọ na-aghọ mfe n'ihi na onye ọrụ na-ahọrọ ndị kasị mma.
Gịnị bụ iMovie?
Apple malitere mmepe nke iMovie ke mbubreyo 90 na mbụ version site otu aha e mepụtara na ulo oru n'afọ 1999 na ebe ọ bụ na ụbọchị ọ na-otu nke kasị mma na ọkaibe mmemme iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye a video nchịkọta akụkọ na-emezu niile chọrọ na nke a. Nke a na usoro nweela mkpa na Itie oge na downloads e ụba kemgbe. Nke a bụ ihe n'ihi na eziokwu na ihe omume ahụ e kụziri site Apple na maka otu ihe ahụ ọ na-e weere dị ka a milestone site ọkachamara video editọ. Na ọnwa nke July 2015 mbụ anụ ntọhapụ na oru site Apple na nke a nke maa na-egosi na otú njọ ụlọ ọrụ ahụ bụ na nke a iji jide n'aka na ihe kasị mma na-ada ka ndị ahịa na nke a. Ọ bụ mgbe nile upgrades nakwa dị ka n'ozuzu mmezi na nche releases nke usoro ihe omume ga-eme ka n'aka na ọ na-aghọ akpa oke nke onye ọrụ na nke a.
Gịnị bụ Final Cut Pro?
Ọ bụ onye na-abụghị linear video edezi software nke e mepụtara Macromedia mbụ niile na mgbe ahụ ikike e n'elu site Apple Inc. na ugbu a na ụlọ ọrụ na-emepe emepe ihe omume iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe omume bụ mepụtara na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na-akawanye nile a chọrọ n'aka na e nwere ụdị agha na nke a nke na-egosi na ọrụ na-kewara abụọ dị iche iche n'elu uru nke ihe omume. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na Final Cut pro nwetara ya mbụ anụ ntọhapụ na September 4, 2015 ie 10 ụbọchị tupu. Mgbe oge na-nke na-ede nke a nkuzi a usoro ama hụrụ 25 nde + downloads na nke a.
A tụnyere n'etiti iMovie na Final Cut Pro
Ọ bụ-ahụ kwuru na e nwere ọtụtụ ndị dị iche iche nke na-eme n'aka na iMovie bụ maa a mma na ikwu na video edezi na maka otu ihe ahụ onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke oke bụ na e mere nke a . Ọ na-na--ahụ kwuru na table n'okpuru ga-emekwa ka n'aka na ihe ndị kasị ihe ndị bara uru na-kọwara na nke a:
N'okpuru ebe e kwuru okwu ndị top atọ reviews si n'elu media weebụsaịtị ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma pụta na ikwu na iMovie na metụtara onu:
1. PC Mag nyochaa
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma reviews meworo ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma si nke usoro ihe omume dị ka ọ bụghị nanị na-aja omume ma na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ na-akawanye ịmata glitches na nke a ga-eme ka n'aka na nke kacha mma nhọrọ bụ na e mere nke a na ọkaibe omume ndị na-ada gaa n'ihu. A nyochaa ukwuu tụrụ aro dị ka ọ ga-ahụ na ihe omume ahụ na ihe ọmụma nke kasị mma dị ihe ọmụma na-ebudatara na nke a.
2. Top iri reviews, nyochaa nke iMovie
Nke a na saịtị maa achoghidi Intro dị ka ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe media nakwa dị ka tech saịtị nke na-n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi n'ozuzu kasị mma ojiji nakwa dị ka n'ozuzu atụmatụ ojiji ihe ọmụma na nke a. Inweta ihe kasị mma nke usoro ihe omume na-aghọ mfe Ozugbo a nyochaa na-agụ na nke a.
3. CNET nyochaa
Otu ugboro ọzọ CNET achoghidi nkọwa na niile dị ka ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe tech na mgbasa ozi na saịtị nke na-n'aka na onye ọ bụla na omume na-enyocha na nke a. Ndị nchịkọta akụkọ ndetu ebe a banyere na iMovie bụ otu n'ime ooh elu na ọkachamara omume na e mepụtara site Apple Inc.
-Esonụ na-na reviews nke Final Cut site n'elu saịtị nke tech ụlọ ọrụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nghọta na ọ na-achọ.
Nke a na saịtị a maara nke ọma na-eme ka n'aka na Apple Inc na ngwaahịa na-enyocha dị ka aha-egosi. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà nyochaa-agbaso na nke a ga-esi na ya pụta na ndị kasị mma dị ka usoro ihe omume e kọwara na zuru ezu.
2. Videomaker nyochaa
The Final Cut pro e lere dị ka usoro ihe omume nke e matured na resultantly onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe omume na ga-eme ka video edezi mfe na nchebe. The nyochaa na-egosikwa na ndị kasị mma na otito na usoro e ji na nke a.
3. Apple Insider nyochaa
Ọ bụ otu n'ime ndị na weebụsaịtị na e raara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ihe ọmụma na-akwanyere ndị Apple ngwaahịa. The nyochaa na e gwa ebe a na-ahụ na onye ọrụ maara na Uru nke Final ịkpụ Pro e ezubere iche na nke a.
> Resource> iMovie> iMovie VS ikpeazụ ịkpụ pro, nke otu ihe ọma n'ihi na ị